Cancalli Waliigalaa kun amaloota unkaa too'annoo waliigalaa akka ibitu si dandeessisa. Amaloonni kun gosa too'annoodharratti hundaa'udhaan garagara. Amaloonni asiin gadii kun hundi too'annoowwan hundaaf hin jiraatu.
Baafata halqaraa maalimaa filatamee bani,cancala Too'annaa - Waligala fili
Kamshaa Unka Too'atannootaa yookin Unka Saxaxa bani,Cancala sajoo - Too'annoo Waligala fili
Yoo unkaa galmee ammee gara dhangii HTML tti alerge, gatiiwwan too'annoo durtii alergame, gatiiwwan too'annoo ammee miti.Gatiiwwan durtii tilmaamamuu kan danda'u-gosa too'annoo irratti hundaa'eti-amaloota gatii durtiitin(fakkeenyaaf, dirreewwan barruu keessaa), Haalojii durtii(sanduuqawwan makaa fi dirreewwan filannoo), akkasumas Filannoo durtii( sanduuqawwan tarreetif).
Yoo dhimmamaan ugguraa galche, arfiilee bakka arfiilee dhimmamaan barreeffamee bakka bu'u agariisu tilmaamamuu dandeessa. Arfii ugguraajalatti, lakkaddaa AKSII arfii barbaadme galcha. Gatii 0 hanga 25 fayyadamuu dandeenya.
Arfiilee fi lakkaddaawwan ASKII isaanii kan mul'atu qaaqaArfiilee Addaa (Saagi - Arfii Addaa).
Durtii barruu sanduuqa barruuf ykn makaaf qindeessi.
Filannoo galuumsa barruu gargaarsaa akka qajeelcha too'annootti mul'atan jajjabeessa. Weyta hantuuten too'annoorra siiqsame qajeelchi barruu haalata dhimmamaa mul'isa.
Gosa qabduulee URL tiif, barruun gargaarsaa akka qaccee diriiree bakka teessoo URL'ii URL jalatti galfame.
Dirree too'annoo tokkoon tokkoo keessatti odeeffannoo dabalataa ykn barruu iftaa'aa dirree too'annoof ifteessitu dandeessisa. Amalli kun saganteessaa odeeffannoo dabalataa lakkada sagantaa keessatti fayyadamnu olkaa'uf gargaara. Dirreen kun kan fayyadu, fakkeenyaaf, jijjiiramaaf ykn ulagaalee madaalinsaa birootif.
Dirreewwan too'annoo barruu ykn matadureewwan mul'ataa qabaniif, bocquu fayyadamuu barbaanne mul'isu fili. Qaaqa Bocquu banuuf, qabduu ... cuqaasi. Bocquun filatame maqaawwan dirreewwan too'annoo keessatti fi deetaa dirreewwan too'annoo gabatee keessaa mul'isuuf fayyada.
Cuqaasurratti xiyyeeffannaa fudhadhu
Yoo filannoo kana gara "Eeyyee" qindeessite, yeroo qabduu gaddhiibdu qabduu dhiibdun xiyyeeffannaa fudhata.
AmalaDhaabduucaancale tilmaama yoo dirree too'annoo furtuu cancalaa wajjiin filamuu danda'a. Filannoon asiin gadii ni argama:
Weyta furtuu cancala fayyadamnu, xiyyeeffannoon too'annoo dhiisisa.
Too'annoon furtuu cancalaa wajjiin filamuu danda'a.
Dhangii lakkada too'annoof ifteessa. Dhangii lakkadaa filuuf qabduu... cuqaasi.
dirreewwan guyyaatin dhangii guyyaa dubbisuuf barbaaddu tilmaamuu dandeessa.
Dirreewwan dhangii(guyyaa, yeroo, maallaqaa, lakkoofsaa)hundinuu akkuma naqa galchiturratti hundaa'udhaan isaan dhiiftun dhangii filame keessaa ofumaan dhangi'ama.
Dhangii yeroo mul'isuuf barbaannu ibsuu dandeessa.
Dheerina barruu olaanaa
Barruu fi Sanduuqota makaaf, Lakkoofsa arfiilee olaanaa dhimmamaan galchuu danda'u ibsa. Yoo amalli dirree too'annoo hin dhugoomne, qindoominni durtii zeeroo ta'a.
Yoo too'annoo gara kuusaa deetaa koronyatee fi dheerinni barruu dirree ibsama kuusaa deetaa irraa fudhatame, dheerina barruu as galchuu hin qabdu. Qindoominoonni kuusaa deetaa irraa qofa fudhatama yoo amalli too'annoo hin ibsamne (hima "Hin Ibsamne").
Madda asxaa too'annowwaniitiif ifteessuf. Barruun diree asxaa bakka maqaa dirree kuusaa deetaa fayyaduu danda'a. Fakkeenyaaf, Naannesaa Gingilchaa, qaaqaBarbaadu keessaa, akkasumas maqaa sarjaa mul'ata gabatee keessaa.
Arfii asxaa tokko akka nimoonikiitti ibsuuf, kanaafuu dhimmamaan arfii furtuu gabatee irraa gadqabuun too'annoo kana fayyadamuu danda'a, arfii dalduufa (~) fuuldura arfii asxaa keessaa galchaa.
Weyta qabduulee raadiyootti fayyadaman barruu goodayyaa garee qofatu akka dirree sarxatti fayyade. Barruun qabduuleen raadiyoo kun garee walfakkaatan hundaaf fayyada.
Yoo qabduu ... dirree barruutti aanu irra cuqaaste, qaaqa Filannoo Dirree Sarxaa ilaaluu dandeessa. Sarxaa tarreerraa fili.
Geessituu too'annoo fi dirree sarxaa ramadamee gidduu jiru haquuf sanduuqaHiriirri hinjiru jedhu mirkaneessi.
Amalli Dubbisqofa too'annoowwan mara iddoo dhimmamaan barruu galchuu danda'u keessatti ramaduu danda'a. Yoo amala dubbisqofaa gara dirree calaqqee saxattoowwan kuusaa deetaarraa fayyadame ramadne, dhimmamaan saaxattoowwan haaraa gara kuusaa deetaa saaguu hin danda'u.
Gatii durtii kabala maraaf qindeessa.
Akka filannoon ykn sanduuqni makaan durtiidhaan filatame ifteessa.
Gosa qabduu haaromsituuf, Yoo qabduun haaromsuu dhimmamaan ka'aa taate haalojii too'annoo ibsuu dandeessa.
Dirreewwan filannoo gurmaa'ef, haalojii garee qindoomina durtiin walgitan amala Haalojii Durtiitin ibsama.
Galfata sanduuqa tarree akka galfata durtiitti mallatteessuf.
Gosa qabduu haaromsituuf, Durtii filannoo galfata yoo qabduun haaromsuu dhimmamaan ka'aa taate haalojii too'annoo ibsuu dandeessa.
Sanduuqa tarree gatii tarree qabaniif, qabduu...banuuf qaaqaDurtii filannoocuqaasuu dandeessa.
Qaaqa Durtii filannoo keessatti, yeroo unkaa sanduuqa tarree qabu bannu galfata akka filatetti mallateessuu barbaadde fili.
Maalima tokkoo ol sanduuqa tarree keessaa akka filattu ni heyyama.
Sanduuqonni makaan akka sarjaawwanii gabatee too'annootti saagaman yeroo hunda akka durtitti gadbuufama.
Maaloo tips too'annoowwan furtuu gabatee wabeessu yaadaneessi.
Galfata tarree durtii durmurtaawaan gara sanduuqa Makaa durtii filannoo tti gala.
Galmeewwan HTML'iif, galfatni tarree cancala Waliigalaa iyyaatoo HTML iin walgitanitti <OPTION>; galfatni gatii tarree cancala Deetaa irraa Qabeentota Tarree jalaa iyyaatoo <OPTION VALUE=...> walgitu galchuu.
Too'annoo dhokataakeessatti, Gatiijalatti, Deetaa too'annoo dhokataa irraa dhaalame galchuu dandeenya. Deetaan kun weyta unkaa eginu ni darba.
Gatii durtii dirree too'annoof qindeessaa. Fakkeenyaaf, yeroo unkaan baname gatiin durtii ni galfama.
Gosa qabduu haaromsituuf, Galfata durtii filannoo yoo qabduun haaromsuu dhimmamaan ka'aa taate haalojii too'annoo ibsa.
Intarvaalota too'annoo qabduu qaanxii tokko kakaasuf hir'isuu ykn dabaluu tilmaama.
Dirreewwan lakkoofsaa fi maallaqaaf akka dhimmamaan gatii gadaanaa galchine ugguruuf gatii maayyii tilmaamuu dandeessa.
Gatii gadaanaa mari.
Gatii gadaanaa too'annoo kabala maraa ifteessa.
Dirreewwan maallaqaa fi lakkoofsaaf, gatii olaanaa dhimmamaan galchuu danda'u tilmaama danda'a.
Gatii olaanaa mari.
Gatii olaanaa too'annoo kabala maraa ifteessa.
Gingilchuu / Fooyuu
Qabduulee kuusaa deetaa naannawinsa wixinuuf gochaalee naannawinsatti fayyadamu dandeessa.
Gabateen asiin gadii gochaalee gara qabduu siqsa
Gochi tokkollee hin ml'atu
Yeroo gara faayilii PDF alerginu URL gara amala unkaa deetaa sanduuqa barruu "URL" galchaa.
Qindoomina dirreewwan too'annoo addaa keessaa gara durtiiwwan duribsamanii haaromsuuf (Durtii Haalojii, Durtii Filannoo, Durtii Gatii)
Galmee banaa /fuula saphaphuu
URL URLjalatti ibsame bana. Goodayyaa galtee ibsuuf Goodayyaa fayyadamuu dandeessa.
Unkaa ammee gara kuusaa jalqabatti siiqsi.
Unkaa ammee gara kuusaa duratti siiqsi.
Unkaa ammee gara kuusaa ittaanutti siiqsi.
Unkaa ammee gara kuusaa maayyii/Dhumaa siiqsi.
Yoo barbaachisaa ta'e ,kuusaa ammee olkaa'i.
Galiinsa deetaa gaabbi
Jijjiirame kuusaa ammee keessaa faallessa.
Unkaa ammee gara tarree saaguu siiqsi.
Kuusaa ammee haqi
Unkaa ammee dhihoo kana kaawaman deebi'ii fe'i.
Yoo dirree cuqaaste, filannoo tarree goodayyaa kamitti galmeen ittaanu akka fe'amu murteessuu filachuu dandeessa. Danda'ammoonni kanaa gadii ni jiru:
Galmeen ittaanu goodayyaa duwwaa haaraa keessatti uumame
Galmeen ittaanu goodayyaa haadhoo keessatti uumame. Yoo haadhoon tokkoolleen hin argamne, galmee goodayyaa wal fakkatu keessatti uumame.
Galmeen ittaanu goodayyaa haadhoo keessatti uumame.
Galmeen ittaanu fooddaa sadarkaa gubbaa keessatti uumame, innis, sadarkaa goodayyaa olaanaa keessatti; yoo goodayyaa ammeen fooddaa gubbaa ta'e, galmeen goodayyaa ammee keessatti uumame.
Amala goodayyaa unkaalee HTML iif firoomaa, garuu unkaalee kuusaa deetaatiif miti.
Yoo gasa barruu "Sar-baay'ee dhangi'amaa" filte, too'annoo kana gara dirree kuusaa deetaa hidhuu hin dandeessu.
Too'annoon kun sarjaa barruu too'annoo gabatee keessaa "naqa sararabaay'ee" maqeessa.
Guyyaa duraanii kan dhimmamaan galche tilmaama.
Durtii guyyaa qindeessi.
Guyyaa gatii biroo kan dhimmamaan jalqabame kan hin caalle ifteessa.
lakkadda arfii dirreewwan sarxaa keessaa ibsuudhaan, wanta dhimmamaan dirree sarxaa keessatti galchu tilmaamuu dandeessa.
Dheerinni haguuggee gulaallii lakkoofsa qubannoowwan naqaa danda'amu tilmaama. Yoo dhimmamaan arfiilee haguuggee gulaallitiin wal hin ginne galche, naqni ni tufama weyta dhimmamaan dirree gad dhiisetti. Haguuggee gulaallii ibsuuf arfiilee asiin gadii kana galchuu dandeessa.
Barruu dhaabbata. Qubannoon kun hin gulaalamu. Arfiin haguuggee qubannoo walgitaa irratti mul'ata.
Arfiileen a-z fi A-Z galuu danda'u. Arfiileen gurguddaan gara arfiilee xixiqqaa hin jijjiiraman.
Arfiileen A-Z galuu danda'u. Yoo qubee xixiqqaan gale, battalumaan gara qubee gurguddaa jijjiirama
Arfiileen a-z, A-Z, fi 0-9 galuu danda'a. Arfiileen guddaan gara Arfiilee xiqqaa hin geeddaramu.
Arfiileen A-Z fi 0-9 galuu danda'a. Yoo qubee xiqqaan gale, battalumaan gara qubee guddaa jijjiirama.
Arfiilee 0-9 qofatu galuu danda'u.
Arfiileen maxxanfamuu danda'an hundi galuu danda'u.
Arfiileen A-Z galuu danda'u. Yoo qubee xiqqaan gale, battalumaan gara qubee guddaa jijjiirama.
Haguuggee "__.__.2000" sararaaf, fakkeenyaaf, haguuggee gulaali "NNLNNLLLLL" hiiki itti aansuun itti gargaaramaan yeroo guyyaa saagu lakqurxoota afur qofa saaga.that the user can only enter four digits when entering a date.
dirreewwan haguuggetiin haguuggee laataraalii ibsuu dandeenya. Haguuggeen laataraalii gatiiwwan jalqaba unkaa, Akkasumas yeroo mara kan mul'atu erga unkaa naqannee booda. Lakkada arfii haguuggee gulaallitti fayyadamnee, galfatawwan dhimmamaan dirree haguuggeetti barreesse tilmaamuu dandeessa.
Dheerinni haguuggee laataraalii yeroo hunda dheerina haguuggee gulaallitiin wal gitu qaba. Yoo kun dhimma hin taane, haguuggeen gulaallii takkaa ni murama ykn hanga dheerina haguuggee gulaallii duwwaan guutama.
Halluu duubbeen dirreewwan too'annoo baay'eef argama. Yoo Halluu duubbee, Tarreen halluuwwan garagaraa keessaa filuuf dandeessisu bana. Filannoo "Baratamoo" sirna qindoomina fudhata. Yoo halluun barbaadame hin tarreeffamne, qabduu ... cuqaasi qaaqa Halluu ibsuuf.
Halluu mallattoolee too'annoowwaniif ibsa, fakkeenyaaf xiyya kabala maraa irraa.
Hammamtaa abgudduu kabala maraa "gatii yuniitota" keessaa ifteessa. Gatiin ("Gatii olaanaa maraa" Hir'isuu "Gatii gadaanaa maraa." ) / 2 bu'aan abgudduu keessaa walakkaa bal'ina duubbee kan qabatudha.
Yoo gara 0 qindeessite, yabbinni abgudduuwwanii hojjan isaatin walqixa ta'a.
Hantuutee golollee marfataa
Yeroo itti fayyadamaan hantuutee golollee maru gatiin jijjiiramuu isaa qindeessi. Tasumayyu: Gatiin hin jijjiiramu. Yeroo xiyyeeffannaa: (durtii) Yommuu too'annoon xiyyeeffannaa qabatuu fi gololleen too'annoo agarsiisuu fi marfamu gatiin ni jijjiirama. Yeroo Hundaa: yommuu gololleen gara too'annootti xiyyeeffatuu fi marfamu, wantootni too'annoon irratti xiyyeffatu tokkolee gatiin isaanii hin jijjiiramu.
Hiriirsuu/ Saxaatoowwan hiriirsuu
Filannoon hiriirsaa bitaahiriire, mirgahiriire, fi wiirteffame. Filannoowwan kun kan argamaniif maalimoota asiin gadiitif:
Mataduree dirree sarxaa
Qabiyyee dirreewwan barruu
Qabiyyee dirreewwan gabatee too'annoo gabatee tarjaawwan keessaa
Saxaatoowwan ykn barruu qabduulee keessatti fayyadamnu
Filannoon Hiriirsa qabduuleef Saxatoo Hiriirsaa jedhame waamama.
Too'annoowwan gabatee keessatti, gatii tarree hojjatiif galchi. Yoo barbaadde, gatii yuniitii safara gatiinsaatiin duukame galchuuf nu dandeessisa, fakkeenyaaf, sm 2.
Iddo bu'ee dursaa
Weyta dirreewwan maallaqatti fayyadamnu mallattoon maallaqaa lakkoofsa dura ykn booda mul'atuu isaa tilmaama. The default setting is currency symbols are not prefixed.
Yeroo too'annoo cuqaasnu fi qabduu hantuutee gad qabnu yoo gochi too'annoo kan akka qabduu sarxaa irra deddeebi'e ifteessa.
Yeroo dhimmamaan gara islaayidii ittaanaa kabala maraa irraa cuqaasu gatii dabalaa ykn hir'inaa ifteessa.
Yeroo dhimmamaan xiyya sajoo kabala maraa irraa cuqaasuf gatii dabalaa ykn hir'inaa ifteessa.
Kabala naannawiinsaa handaara gadaanaa too'annoowwan gabateerraa mul'isuu fi dhabuu isaa ifteessa.
Gosa kabala maraa sanduuqa barruu ibteessu dabali.
Iddoo too'annoon korkoda'u hiiki.
Kuusaa irratti gocheessuu
Kuusaa ammee xiyyaan marked ta'e keessatti akka tarjaan jalqabaa moggaasa tarree wajjiin mul'ate ifteessa.
Dirree maallaqaa keessatti, arfii ykn diraa amaloota Mallattoo maallaqaa keessatti galchuun mallattoo maallaqaa duribsuu dandeenya.
Tokkoon tokkoon dirree too'annoo fi unkaa amala Maqaa ittiin addabaafamu qabu. Maqaan Unkaa Naannawaa keessatti argamu akkasumas, maqaa fayyadamaa, dirree too'annoo maakiroo irraa agarsiisa. Qindoomina durtii duraanuu maqaa asxaa fi lakkoofsa dirreewwanitti fayyadamuun ijaarame ifteessa.
Yoo maakroo wajjiin hojjatta ta'e, maqoonni too'annoowwanii adda ta'uu isaa mirkaneessi.
Maqaanis too'annoowwan garagaraa kanneen hojiin isaanii walitti dhihaatu garee tokko jalatti fiduuf fayyada, kanneen akka qabduulee reediyoo. Kana hojjachuuf, miseensota garee maraaf maqaa tokko kenni:too'annoowwan maqoota walfakkaatan qaban garee uumu. Too'annoowwan gareeffaman Sanduuqa Gareetti fayyadamuun dhugaan bakka bu'uu danda'a.
Too'annoon akka haalata jiru keessatti mul'atu ibsi. Haalata saxaxa keessatti, too'annoon yeroo hundaa mul'ata.
Hubachiisa, yoo amali kun gara "Tole" (durtii)tti qindaa'e, kana jechuun too'annoon sirriimaan argii irratti uumama jechuu miti. Ittisamootni dabalataa yeroo mul'ita kan too'annoo sirriitti herregnu hojjoomu. Fakkeenyaaf, too'annoo kutaa dhokataa hanga kutaan xiqqaan ofiisaa mul'atuti kan Barreessaa keessaa hundi isaa tasumayyuu hin mul'atu.
Yoo amali "No"tti qindaa'e, too'annoon yeroo hunda haalata jiru keessaa dhokata.
Yemmuu galmeewwan warra akka itti fayyadamtu godhan dubbistuu, fooyya'aan OpenOffice.org inni moofaan hanga 3.1 amala kana ni tuffata.
Barruu sarara tokkoo ol irratti agarsiisa. Sarara ciccitaa sanduuqa barruu keessaa akka fayyadamnu ni heyyama, kanaafuu barruu sarara. Cita sararaa hujeekan galchuuf, furtuu Galchi dhiibi.
Dalagaan OfumaaGuutii tarree galfataawwan duraanii erga galfata barreessuu eegallee mul'isa.
Olee too'annoo hiiki.
Too'annoo qabannoo Y, korkoddii sadhaatawaan hiiki.
Amalli Qabduu durtii qabduu walgitan hojirra oolchu weyta furtuu deebistuu dhiibdu ifteessa. Yoo qaaqa ykn unkaa bantee akkasumas gocha dabalataa tokkollee hin qabanne, qabduun amala kanaa qabduu durtiiti.
Amalli kun qabduu qeenxee galmee keessaa qofatti ramadamuu qaba.
Weyta unkaawwan fuula saphaphuutti fayyadamnu, haguuggewwan barbaachaa irratti amala kana qaxxaamuru dandeessa. kunneen haguuggewwan gulaallii dirree barruu fi gosa qabduu ergituu qabdu dha. Tarmiin barbaachaa dirree barrutti kan galuu fi barbaachi qabduu kakaaftuun eegala. Yoo qabduun akka qabduu durtitti ibsame, barbaacha eegaluuf tarmii barbaachaa erga galchitee booda salphumatti Galchi dhahi.
Dirreewwan lakkoofsaa, dirreewwan maallaqaa, dirreewwan guyyaa fi yeroo qabduulee qaanxii unkaa keessatti jalqabamanitti.
Qajeelfama surdala ykn sarjaa kabala maraa ykn qabduu qaanxii ifteessa.
dirree lakkoofsaa fi maallaqaa wajjiin foo'aa kumaatama akka fayyadamne tilmaamu danda'a.
Too'annoo qabannoo X, korkoddii sadhaatawaan hiiki.
Amala asxaa dirree too'annoo asxaa unkaa irratti mul'ate qindeessa. Amalli kun asxaa mul'ataa ykn irraantoo sarjaa dirree deetaa unkaalee too'annoo gabatee keessaa tilmaama.
Weyta too'annoo haaraa uumnu, ibsamni amala Maqaa keessatti duribsame akka durtii too'annoo sarxeessuf. Sarxaan maqaa dirree too'annoo qaba fi intijarii too'annoo lakkoofsisan (fakkeenyaa, QabduuAjajaa1). Amala Mataduree wajjiin, ibsama biroo gara too'annoo ramaduu danda'a kanaafuu sarxaan hojjaa too'annoo balaqqisiisa. Sarxaa ibsamaa too'annoo dhimmamaatti mul'atutti ramaduuf galfata kana jijjiiri.
Mataduree sar-baay'ee uumuf, xiyya qabduu fayyadamuun sanduuqa makaa bani. Shift+ dhiibuudhaan Command Ctrl gadqabuun cita sararaa saagi.
Amalli Matadure maalimaa unkaa sarxeessuu walqunnamaa dhimmamaa kessatti qofa fayyadu. Yoo maakiroon dalagde, If you work with macros, Yeroo ka'uumsatti yaadadhu, too'annoon yeroo mara kan iddeeffamu amala Maqaa keessa dabruun.
Calaqqee hammamtaa too'annootti taasisuuf deebi'ii hammamteessi.
Sararootni Barruu kan dhaabbatan
Dirreewwan barruutif, dhuma lakkada sararaa weyta barruu sarjaa kuusaa deetaatti barreessinu fayyadamnu fili.
Qabduun calaqqee amala Saxatoowwanii qaba. Amalli Saxatoowwanii xurree saxatoowwanii fi maqaa faayilii qabduu irratti agarsiisu barbaadde ifteessa. Yoo faayilii saxatoo qabduu ... wajjiin filte, xurree fi maqaa faayilii ofumaan sanduuqa barruu keessa gala.
Dirreewwan lakkoofsaa fi maallaqaan Lakkoofsa digitiiwwan mirga tuqaa kurnyeetti mul'atan tilmaama.
Gatii intarvaalota qabduulee qaanxii maallaqaa fi lakkoofsaa durqindeessuu dandeessa. Gatii xiyyoota gadee fi olee qabduu qaanxiitti fayyadamuun dabaluu ykn hir'isuu.
Specifies the delay in milliseconds between repeating events. Mudata deddeebi'aan kan argamu weyta qabduu xiyyaa ykn duubbee kabala maraa cuqaasuu dandeessa, ykn Kabala Naannawiinsaa kuusaa qabduulee naannawiinsaa tokko, akkasumas qabduu hantuutee yeroo muraasaaf gadqabuu kee eegda. Gatii yuniitii yeroo gataa'insaatin duukame galchuu dandeessa, fakkeenyaaf, s 2 ykn ms 500.
Teessoo URL gosa qabduu galmee banaaf ykn fuula saphaphuuf sanduuqa URL keessaa galcha. Weyta qabduu bannu teesson ni banama.
Yoo hantuutee qabduu haalata Dhimmamaa irra siiqsine, URL'n akka qaccee diriiratti argama, barruun Gargaarsa biraa hin galle jajjabeessa.
Yabbina sarjaa dirree gabatee too'annoo yuniitii filannoowwan LibreOffice keessatti ibsame keessaa qindeessa. Yoo barbaadde, gatii yuniitii safara gataa'insaan duukamu galchuu dandeessa, fakkeenyaaf, sm 2.
Bal'ina too'annoo hiiki.
Durtii yeroo qindeessi.
Yeroo gadaanaa dhimmamaan galchuu danda'u tilmaama.
Title is: Waliigala